WINDOWS 10 ကိုပေါ်တွင်သင်၏ကွန်ပျူတာ SETTINGS ကြည့်ရှုရန်ကဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင်ကွန်ပျူတာစွမ်းဆောင်ရည် Learn
ဆော့ဖ်ဝဲအားလုံးသည်ဗားရှင်းကြောင့်လျှောက်လွှာဆော့ဖ်ဝဲသို့မဟုတ်ဂိမ်းရှိမရှိအလုပ်နိမ့်ဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ (ထိုကဲ့သို့သောခေတ်သစ်ဂိမ်းဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ် Photoshop ကိုကဲ့သို့) က "မိုးသည်းထန်စွာ" software ကို install မလုပ်ခင်စက်သည်ဤလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံရှိမရှိရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ Windows 10 ကိုထိန်းချုပ်မှု running ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဤစစ်ဆင်ရေးကျူးလွန်၏နည်းလမ်းများအဆိုပြုအောက်တွင်။
Windows 10 ကိုအပေါ်ကို PC performance ကို Browse
တစ်ဦးက desktop ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကို၏ hardware စွမ်းရည်နည်းလမ်းနှစ်ခုအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်: တစ်တတိယပါတီလျှောက်လွှာကို အသုံးပြု. သို့မဟုတ်နည်းလမ်းတစ်ခုစနစ် embedded ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအ option ကိုမကြာခဏပိုအဆင်ပြေနှင့် functional ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပယ်ကိုစတင်ချင်ပါတယ်။
Windows 8 ကို PC performance ကို Browse
Windows7ကိုမှကွန်ပျူတာ setting များကိုကြည့်ရှုခြင်း
Method ကို 1: တတိယပါတီ software ကို
သငျသညျကွန်ပျူတာစနစ်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကြည့်ရှုဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းဤမျှလောက်များစွာသော applications များရှိပါသည်။ windose 10 အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာတစ်ဦး utility ကို System ကိုအင်ဖိုသည်ကို Windows ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် SIW အတိုကောက်။
SIW ကို download လုပ်ပါ
တပ်ဆင်ပြီးနောက် SIW ကို run ခြင်းနှင့်ကို select "ဟုအဆိုပါစနစ်၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်" အပိုင်း "ပစ္စည်းကိရိယာ".
သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ် Laptop ကိုအပေါ်အခြေခံဟာ့ဒ်ဝဲသတင်းအချက်အလက်ဖွင့်ဖို့လက်ယာဘက်အခြမ်းမှာတော့:
စနစ်ကအစိတ်အပိုင်း performance အကဲဖြတ်ခြင်း,
တင်တဲ့ volume နဲ့ HDD နှင့် RAM ကို;
လက်ဝဲ Menu ထဲမှာသငျသညျအစစက်၏ဆော့ဖ်ဝဲ features တွေရှာတှေ့နိုငျဥပမာ - အဘို့, operating system နဲ့ဒါအပေါ်ဝေဖန်ဖိုင်များ, ကို install ယာဉ်မောင်း, ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများနှင့်များ၏အခြေအနေအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, မှတ် utility ကိုအကြီးအသေးစိတျထဲမှာလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲမဟုတျဘဲအားနည်းချက်များမပါဘဲ: program ကိုပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်စမ်းသပ်မှုဗားရှင်းက၎င်း၏စစ်ဆင်ရေး၏အချိန်အားဖြင့်သာကန့်သတ်, သို့သော်သတင်းအချက်အလက်များမပြထားဘူး။ သင်ဤအားနည်းချက်အတူတက်ထားရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, Window များအတွက်အခြားနည်းလမ်း System ကိုအင်ဖိုတစ်ရွေးချယ်ရေးပေးထားပါတယ်။
Method ကို 2: စနစ်နည်းလမ်းများ
ချွင်းချက်မပါဘဲ, Redmond operating system မြားအပေါငျးတို့သဗားရှင်း built-in ထားသောကွန်ပျူတာ settings ကြည့်ရှု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို။ သင်တန်း၏, အဲဒီကိရိယာ Third-party ဖြေရှင်းချက်အဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမပေးပါဘူး, ဒါပေမယ့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက် fit ပါလိမ့်မယ်။ လက်ျာသတင်းအချက်အလက်လူစုခွဲကြောင်းသတိပြုပါ, ဒါကြောင့်သင်အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်မျိုးစုံဖြေရှင်းချက်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ခလုတ်ကိုရှာတွေ့ "Start" နှင့်လက်ျာ mouse ကို button ကို click လုပ်ပါ။ ဆက်စပ်မီနူးထဲမှာ, select လုပ်ပါ "စနစ်".
အပိုင်းဖို့အောက်ကိုဆင်း "စက်ပစ္စည်းလက်ခဏာ" - ဒီနေရာမှာ RAM ကို CPU နဲ့ငွေပမာဏနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းချုပ်ကိုသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ကြသည်။
သင်သည်လည်းပြည့်စုံဘို့လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်ကွန်ပျူတာ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. သာအခြေခံသတင်းအချက်အလက်, ဒီ tool ကိုသုံးပြီးတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်နှင့်အတူ "DirectX ကို Diagnostic Tool ကို".
ကီးဘုတ် shortcut ကိုသုံးပါ ဦးဝင်း + R ကို ခေါ်ဆိုခပြတင်းပေါက်များအတွက် "Run ကို"။ အကွက်ထဲတွင်က command ကိုရိုက်ထည့်dxdiagနှင့်စာနယ်ဇင်း "အိုကေ".
တစ်ဦးက window ကိုအဖြေရှာတဲ့ utility ကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံး tab ကိုတွင်, "စနစ်"သင်ကကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းရည်အကြောင်းကိုတိုးချဲ့သတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် - CPU နဲ့ RAM ကိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အပြင်, DirectX ကို၏ဗီဒီယိုကဒ်တပ်ဆင်ထောက်ခံဗားရှင်းအပေါ်ရရှိနိုင်ပါဒေတာ။
inset "Screen" မှတ်ဉာဏ် mode ကိုအမျိုးအစားနှင့်ပမာဏ, နှင့်ပိုပြီး: ဂရပ်ဖစ်ကတ်များ devaysa အကြောင်းကိုဒေတာများပါဝင်သည်။ Dual-GPU ကိုတစ်ဦး tab ကိုအဖြစ်ပြသနေသည်နှင့်အတူ notebook တွေအတွက် "Converter"ဘယ်ယခုအချိန်တွင်ဗီဒီယိုကဒ်မှာအသုံးမပြုတဲ့အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါရှိသည်။
အပိုင်း "အသံ" သငျသညျအသံ devices များ (ကဒ်နှင့်စပီကာ) အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
tab ကိုအမည် "ကိုထည့်သွင်းခြင်း" ဒါဟာကိုယ်နှိုက်များအတွက်ပြောတတ် - ကကွန်ပျူတာချိတ်ဆက်ကီးဘုတ်နဲ့မောက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရတာဟာ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ PC မှာချိတ်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်, သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်မည် "Device Manager".
အဆိုပါဖွင့်ပါ "ရှာရန်" နှင့်အမျိုးအစားနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလိုင်း device ကို Manager ကထိုအခါတစ်ခုတည်းရလဒ်ပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်နှင့်အတူတစ်ချိန်ကကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
, ပစ္စည်းကရိယာတွေရဲ့အထူးအပိုင်းအစရှုမြင်လိုချင်သောအမျိုးအစားတိုးချဲ့, ထို့နောက်၎င်း၏အမည်နှင့် Right-click နှိပ်ပြီးအပေါ်ကိုနှိပ်ပါ "Properties ကို".
အဆိုပါ tabs များရွေ့လျားတစ်ဦးအထူးသကိရိယာအကြောင်းရှိသမျှကိုအသေးစိတျကိုကြည့်ပါ "Properties ကို".
ပြင်ပ application ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြပေးခြင်းနှင့်အမိန့်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စနစ်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုလိုတယ်နှင့်မည်သည့် Third-party အစိတ်အပိုင်းများကိုမလိုအပ်ပါဘူး: ငါတို့သည်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးသူတို့ရဲ့အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိက Windows 10 ကွန်ပျူတာက Settings ကို run ကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။